Ogaden News Agency (ONA) – Mudaaharaad Balaadhan oo Maanta Gilgilay Magaalooyinka Waawayn ee Itoobiya
Mudaaharaad Balaadhan oo Maanta Gilgilay Magaalooyinka Waawayn ee Itoobiya
Posted by ONA Admin	/ October 15, 2013
Wararka naga soogaadhaya Itoobiya ayaa sheegaya in maanta Salaadii Ciidul Adxaa kadib ay kadheceen magaalooyinka waawayn ee Itoobiya Mudaaharaadyo iyo Banaanbaxyo aad ubalaadhan oo gilgilay guud ahaan Itoobiya. Mudaaharaadyadan oo kadhacay magaalooyin kaladuwan sida Addiss Ababa, Nazeret, Woldia iyo Dessie, ayaa waxaa soo abaabulay Muslimiinta Itoobiya oo intii mudo ahba kacabanayay dhibaatooyinka ba,an ee Gumaysiga Itoobiya uu kuhayo arimaha diinta iyo xoriyatul-Qawlka taasoo keentay in Masuuliin Siyaasadeed, Culimo-Awdiin, Suxufiyiin iyo Madax kale oo caan ka,ah Itoobiya xabsiga lootaxaabo iyagoon waligood wax maxkamad ah lahorkeenin.
Wararkan waxaa kale ooy xaqiijinayaan ineey Ciidamada Nabadsugida EPRDF/TPLF ay xadhig iyo jidh dil baahsan kawadaan goobaha ay Muslimiintu banaanbaxyada kawadaan. Iska hor imaadka udhexeeya Muslimiinta iyo Nabadsugida Gumaysiga Itoobiya yaa keenay inay kunafwaayaan dad rayad ah oon waxba galabsanin taasoo beesha caalamku ay indhaha kuhayso.
Wararka Itoobiya iyo kolba wixii kasoo kordha waxaad kala socon doontaan wararkaanaga dambe haduu eebuhu Yiraahdo. Waxaad hoos kadaawan kartraan filim kooban oo muujinaya siday qaar kamid ah Mudaaharaadyadii maanta udheceen.